China YIHOO Low VOC izithuthi ngombala izongezo kwemveliso kunye Factory | Yihoo
Inkampani inokubonelela ngezongezo ezingezantsi ze-VOC zezithuthi:
UKUHLELWA IMVELISO CAS ISICELO
Iipesenti ezingama-50 UV3853 + 50% PP
· Inokuhambelana okugqwesileyo kunye nokunyibilika ne-PO, okunciphisa kakhulu imvula kunye nekhephu. Ifanele iipolymers ezininzi, kubandakanya iimveliso zePK (ukubumba ngenaliti, izinto zefilimu kunye neetheyiphu), TPO, njl.
· Ingasetyenziswa njengesizinzisi sokukhanya kwi-polyacetal, PA, kwi-styrene polymer nakwi-PUR. Inokwenziwa kwakhona kwi-masterbatch ehlanganisiweyo yokuphatha ngokulula kunye nokusetyenziswa ngexesha lokulungiswa.
Lulolukhetho olufanelekileyo lwe-PP, i-TPO auto parts (ngaphakathi nangaphandle), izinto ezingangenwa ngamanzi ze-TPO, ifenitshala yangaphandle ye-PP kunye nezinye izinto.
Egqithileyo YIHOO TPU elastomer (Thermoplastic polyurethane elastomer) izongezo
Okulandelayo: Izongezo ze-arhente zokugqiba i-YIHOO
ICyasorb Tht 4611
ICyasorb Uv 3346
ICyasorb Uv 3529
Isongezelelo seVoc ephantsi
Voc Flame nekudodobalisa
Ukukhanya okuKhanyayo kwiMpahla
Ummeli oGqibeleleyo weMpahla
I-UV yeVenkile yeTayile
UT Tinvin P